Global Voices teny Malagasy » Feo avy ao Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jona 2019 3:17 GMT 1	 · Mpanoratra Zimpundit Nandika Miranah
Mandritra izany, Manohy ny Kongresim-bahoakany ao Esigodhini, tanàna kely any Matabeleland ny ZANU-PF, ary tsy nahavita nanetsika fanohanana teny ifotony na dia kely aza. This is Zimbabwe manamarika fa tsy mahazatra ho an'ny vahoakan'i Buluwayo ny mahita andiam-piara mitanjozotra an'ny filoham-pirenena mandehandeha eny amin'ny araben'ny tanàna faharoa ao amin'ny firenena .
Burundi: Tezitra tao amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana ao Burundi noho ny tsy filazana momba ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona i Agathon Rwasa, kanefa mpitarika ny FNL maromaro no hita nanao fitafin'ny Firenena Mikambana tamin'ny volana lasa teo .
RDC: Sahara Sara mitatitra momba ny horohorontany tany atsinanan'i Congo izay zara raha notantarain'ny MSM  .
Adventures of a Retired Armchair Traveler mandinika ny heloky ny olom-pirenena RDC voampanga ao Aostralia noho ny fampielezana ny VIH , ka mahatonga izany fahasamihafana lehibe izany,
Malawi: Mike avy ao amin'ny Hacktivate mitatitra ny fihaonana voalohan'ny bilaogera ao Malawi .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/01/139156/
 manamarika fa tsy mahazatra ho an'ny vahoakan'i Buluwayo ny mahita andiam-piara mitanjozotra an'ny filoham-pirenena mandehandeha eny amin'ny araben'ny tanàna faharoa ao amin'ny firenena: http://www.sokwanele.com/thisiszimbabwe/archives/313
 biraon'ny Firenena Mikambana ao Burundi noho ny tsy filazana momba ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona i Agathon Rwasa, kanefa mpitarika ny FNL maromaro no hita nanao fitafin'ny Firenena Mikambana tamin'ny volana lasa teo: http://agathonrwasa.blogspot.com/2005/12/december-10th-2005-un-burundi-has.html
 mitatitra momba ny horohorontany tany atsinanan'i Congo izay zara raha notantarain'ny MSM: http://sarahinthejungle.blogspot.com/2005/12/earthquakes-and-other-unheard-of.html
 mandinika ny heloky ny olom-pirenena RDC voampanga ao Aostralia noho ny fampielezana ny VIH: http://www.livejournal.com/users/congogirl/107010.html
 mitatitra ny fihaonana voalohan'ny bilaogera ao Malawi: http://www.vdomck.org/blog/2005/12/03/stories-from-the-malawi-blogger-meetup/